Maalgashadeyaashu Waxay Doonayeen Mersin Metro | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean33 MersinMaal gashadayaashu waxay rabeen Mersin Metro oo ka socota dibada
03 / 12 / 2019 33 Mersin, Coast Mediterranean, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY
mersin metro waxay raadineysaa maalgashadayaal dibada ka yimid
Mersin, oo ay ku adag tahay inuu ka helo amaahda bangiyada dawladda ee la xidhiidha maal-gashiga nidaamka tareenka, ayaa dibedda u aaday. Duqa Magaalada Mersin Metropolitan Vahap Seçer ayaa yidhi, Wem Waxaan raadinaynaa dhibco ka yimaada dibada. Waxaan rabnaa inaan siinno maalgelin iyo dhismaha ganacsiga meel. ”
Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul waxay ku biirtay Istanbul iyo Ankara oo ka mid ah degmooyinka magaalooyinka waaweyn ee loo yaqaan 'CHP' kuwaas oo dhib ku qabay helitaanka amaahda bangiyada dadweynaha ee la xiriira maal-gashiga nidaamka tareenka oo ay dib ugu laabteen waddan kale.
WorldSida uu sheegayo wararka Fahriye Kutlay Senturk; Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin, oo diyaarinaysa Mashruuca Nidaamka Nidaamka Tareenka ee Mersin kaas oo khadadka taraamku isku dhafan yihiin si loo yareeyo taraafikada magaalada loona yareeyo isticmaalka gawaarida iyada oo la hagaajinayo tas-hiilaadka gaadiidka dadweynaha, oo loo leexday dibedda markii ay ka heli weyday bangihii dadweynaha ay codsadeen. Dowlada hoose ee Mersin, oo isku diyaarineysa inay dalbato qandaraaska iyadoo isku darka maalgelinta iyo dhismaha hal xirmo, ayaa dhameystirtay wadahadalada hordhaca ah ee lala yeelanayo shirkadaha iyo shirkadaha gudaha ee ka kala socda seddex dal oo kala duwan oo ay ku jirto Shiinaha.
Dib-u-eegista tareenka xNUMX kiiloomitir kiiloo mitir
Duqa Degmooyinka Magaalada Mersin Vahap Seçer wuxuu la wadaagay faahfaahinta ugu dambeysa ee mashruuca Mersin Rail System, oo lagu soo daray barnaamijka maalgashiga ee 2019 bishii Sebtember ee ay soo saareen guddiga miisaaniyadda Qorsheynta ee Golaha Qaranka ee Qaranka Turkiga.
Shirkadda fulin doonta qandaraaska waxay heli doontaa maalgelin waxayna sameyn doontaa dhismaha ”
Wuxuu intaas ku daray in khadka tareenka cusub ee 7.7 kiiloomitir lagu daray mashruuca oo uu ku daray: toplam Dhererka guud ee mashruucu wuxuu noqon doonaa kiiloomitir 28.6. Kiiloo mitirka 7.5 kilomitir waa habka tareenka dhulka ka sareeya, 13.4 kiiloomitir waa nidaamka tareenka dhulka hoostiisa ku yaal halka xNUMX kilomitir uu yahay taraam. Tan iyo markii Mersin loo dhisay xeebta min Bariga ilaa Galbeedka, kiloomitir 7.7 ayaa imaan doona dhulka hoostiisa ka dibna 13.4, kiiloo mitir 7 oo dhulka ka sarreysa ayaa ka bixi doonta dusha sare ilaa Isbitaalka Magaalada. Waxaan sidoo kale qorsheynaynaa khadka tareenka ee cusbitaalkayaga jaamacadda iyo jaamacadda ..
Xulashada Mashruuca Nidaamka Raadinta Mersin ee sannadka 2020, Seçer wuxuu caddeeyey inay toogan doonaan qodiskii ugu horreeyay wuxuuna sheegay inay raaci doonaan habab kale oo la xiriira qandaraaska la soo saaray. Seçer wuxuu cadeeyay inay diyaariyeen dalab jilicsan oo labadaba maal gelin iyo dhisme isugujira hal xirmo wuxuuna yiri: “Baadi goobkeena dhibcaha ayaa kusii kordheysa dibada. Aynu halkaas ka helno amaahda, shirkada ha ku sameyso dhismaha, waxaan dooneynaa inaan siinno maalgelin iyo dhismaha ganacsiga meel. ”
Gaadiidka Dadweynaha oo dib loo habeeyay
Seçer wuxuu cadeeyay inay sidoo kale shaaciyeen iibsashada basaska iyo soo qaadashada basaska 100.Kadib markay dhamaato mashruuca nidaamka tareenka, waxay dhisi doonaan hay'ad cusub iyadoo loo eegayo fikradda nidaamka tareenka - basaska gaadiidka dadweynaha. “Sannadkan waxaan iibsaneynaa Basaska 73. Waxaan soo iibsan doonaa basaska 27 bisha Janaayo iyo guud ahaan basaska 100. Waxaan cusboonaysiin doonaa maqaayadda baskeena, waxaan haysanaa gabaabsi, waxaan xoojin doonnaa dariiqooyinka, waxaanan ku ridi doonnaa moodooyinkeenna kuwa gaboobay ama gaboobay. Waxaan tixgelinaynaa fikradda gaadiidka dadweynaha sida bas-tareenka oo waxaan qorsheynay sanadka 5. Maxaan sameyn doonaa inta u dhaxaysa 2019-2024, Immisa basas ayaan qaadi doonnaa, waxaan tagnay soo dhaweynta. ”
Istanbul iyo Ankara waxay deyn ka heleen dibedda
Mas’uuliyiinta Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay taageero liidata ka heleen bangiyada gobolka ee dhismaha Dhismaha Wadada Tareenka ee Tuzla-Pendik ee Wakaaladda Horumarinta Faransiiska ee loo yaqaan '86 million Euro', oo loogu talagalay "Sultanbeyli-Çekmeköy metro Deutsche Bank" waxay heshay taageerada amaahda 110 milyan euro. Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara, 15 Luulyo Kızılay National Will Square, oo ka bilaaban doonta goobaha Pursaklar, garoomada cadaaladda, garoomada diyaaradaha iyo mashruuca cusub ee metrooga ayaa noqon doona jihada Baanka Adduunka ee dhismaha Bangiga uu kala xaajooday shirkadaha Japan.
Limak markii ugu horeysay ee maal gashiga garoonka caalamiga ah ayaa dhammaatay
Isparta Davrazda Markii ugu Horeysay ee la Wareegay Baabuurta Ka Soo Wareegtay Dibadda
Tareenka la soo saaro ee Bursa waxaa sidoo kale laga iibin doonaa dibedda
Hindisooyinka dibada: taraamku wuxuu ka shaqeeyaa Prague, Czech Republic - wadada…
Xarunta dhismuhu waxay abaalmarin ku siisay Adeegyada Dibadda
Tareenada Dhoofinta Dibedda ee Dibedda laga keeno Gökköy
Mashruuca nidaamka tareenka ee Mersin
Dhismaha wadada tareenka ee Tuzla Pendik